Tampa Recovery Data Services | LC Teknolojia | Tampa Florida
Tampa Recovery Data Services
Home → Tampa Recovery Data Services
LC Teknolojia manolotra asa fanarenana antontan-kevitra ho an'ny karazana rehetra Digital Media, anisan'izany ny antontan-kevitra fiara mafy sitrana. Amin'ny maha-iray ny United States’ Flash fitadidiana lehibe indrindra tolotra fanarenana antontan-kevitra ireo orinasa, LC Teknolojia manome asa fanompoana manokana ho an'ny rehetra tsy ho fahaizana ho an'ny matihanina. ny Tampa, Florida angona asa fanarenana indray dia afaka misy sy ny angon-drakitra karazana rehetra. Efa voafafa tsy nahy angon-drakitra raki-daza, sary, -peo lahatsary na antontan-taratasy avy amin'ny haino aman-jery, format na nisintona ny haino aman-jery nandritra ny dingana hanoratra? Ny asa fanarenana angona mety sitrana ny antontan-taratasy sy hahazo indray ny angona.
ny Tampa, Florida angona fanarenana ireo tolotra Labs tontolo voaaro amin'ny angon-drakitra mpanjifa foana manokana. Maso laboratoara fahafahana miditra dia midika hoe manam-pahaizana manokana ihany ny mety hiatrika vaovao saro-pady. Fifanarahana tsy tapaka isika mba sitrana tsiambaratelo ny angon-drakitra ho an'ny governemanta, sampan-draharaha mpampihatra lalàna sy ny fikambanana tsy miankina. LC Teknolojia dia zatra ny haavon'ny fiainana manokana sy ny fiarovana izay mitaky fitaovana sokajiana. Ireo antontan-taratasy rehetra sitrana rehefa voafafa tanteraka 30 andro.
Alohan'ny mandefa ny haino aman-jery ho an'ny fahasitranana, Masìna ianao, niantso ny hiresaka amin'ny iray amin'ireo solontena:
• Toll-Free ao Etazonia: 1-866-603-2195
• Ivelan'ny ny Etazonia: 1-727-449-0891
• In Eoropa, Call: +44 (0)115 704 3306
Ny fisaka-saran'ny saran'ny antontan-kevitra haino aman-jery tselatra asa fanarenana dia ahitana ny famerenana ny angona amin'ny CD na DVD (na amin'ny USB fiara ho an'ny kely fotsiny) ary hiverina ny fandefasana. Fa recoveries ivelan'ny Etazonia, fanampiny saran'ny fandefasana dia nanampy. Tsy misy fiampangana hafa ankoatra ny fandefasana entana miverina isika raha tsy mahita ny raki-daza!
Recovery Service for Digital Media niakatra ho any 2GB – $125
Surcharge ho simba ara-batana haino aman-jery (i.e.. connector tapaka, sns) – $100
Recovery Service for Digital Media 256GB ary ny – $425
Recovery Service for Digital Media 512GB ary ny – $475
Recovery Service for Digital Media 1TB ary ny – $525
Alefaso ny vita Recovery Form ary ny haino aman-jery any amin'ny adiresy eto ambany.
LC Teknolojia manolotra asa fanarenana antontan-kevitra ho an'ny rehetra SanDisk® karazana haino aman-jery nomerika. Izany fanompoana tsy ampy ho an'ny rehetra SanDisk® haino aman-jery nomerika amin'ny sarany raikitra mifototra amin'ny fahaiza fitahirizana ny haino aman-jery. Ny fisaka-saran'ny vidin'ny tselatra fanarenana haino aman-jery dia ahitana ny famerenana ny angona amin'ny CD na DVD (na amin'ny USB fiara ho an'ny kely fotsiny) ary hiverina ny fandefasana. Fa recoveries ivelan'ny Etazonia, fanampiny saran'ny fandefasana dia nanampy. Tsy misy fiampangana hafa ankoatra ny fandefasana entana miverina isika raha tsy mahita ny raki-daza!
SanDisk® Digital Media Recovery niakatra ho any 2GB – $125
SanDisk® Digital Media Recovery 256GB ary ny – $425
SanDisk® Digital Media Recovery 512GB ary ny – $475
SanDisk® Digital Media Recovery 1TB ary ny – $525
Raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny media dizitaly famerenana tolotra, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 na (727) 449-0891 ivelan'ny Etazonia hiresaka amin'ny solontenan'ny mpanjifa. Eoropa sy Aostralia mpitsidika tsidiho LC Tech UK famerenana tolotra.
Azafady ny haino aman-jery an-tsambo ho any amin'ny adiresy manaraka (vaovao izany ihany koa ny voasoratra ao amin'ny famerenana teny):
Ataovy azo antoka ianao fonosana ny haino aman-jery matanjaka amin'ny mpandefa hafatra, marika izany ho misy Electronic Media – tsy hampiharihary ny andriamby saha. dia, mandefa izany amin'ny alalan'ny USPS, UPS, FedEx, Misy sambo mahazo haavo na fomba izay mamela ny fonosana ho fantarina. Azafady antoka ny karatra dia azo antoka ary ny adiresy marina. LC Technology International, Inc. Tsy tompon'andraikitra amin'ny karatra izay very na simba amin'ny fandefasana.
LC Teknolojia fiara mafy manome asa fanarenana antontan-kevitra ho an 'ireo fotoana izay Ilaina ny famerenana an-dafin'ny fahaizany farany-mpampiasa. Izany dia mety ho sitrana ny Nanoritra, angona fanarenana na simba ny fiara mafy. Ny tahan'ny dia mifototra amin'ny saran'ny fisaka fandalinana ny fiara sy ny habetsahan'ny fotoana lany eo ny famerenana.
Noho ny fametrahana mazava tsara ny toetra sy ny aelin'ny mafy samy hafa karazana olana matetika nahita, famerenana Pricing dia miovaova arakaraka ny karazana fahavoazana hita nandritra ny tombana voalohany. Additional fiampangana for fanafihana arrays sy mafy aelin'ny izay efa nisokatra.
lojika / File System Fahasimbana: Amin'ny maha ambany dia ambany tahaka ny $750
Ara-batana / singa fototra Damage: Amin'ny maha ambany dia ambany tahaka ny $1500
FANAMARIHANA: Misy tsy averina fisaka saran'ny vidin'ny $100 isaky ny fiara ho an'ny fanombanana ny fiara fanarenana. Raha toa ka misafidy ny handroso miaraka amin'ny famerenana, fa ny sarany dia ampiharina ny vidin'ny famerenana.
Nanomboka nahazo Mora – mahazo indray ny angona!
Download ny sambo fiara mafy teny, hofenoiko avy, sonia izany, ary ahitana amin'ny fiara rehefa an-tsambo izany ho antsika.
Tsindrio eto raha haka ny fiara mafy fandefasana teny
Package ny fiara tsara mba tsy fandefasana entana sy ny sambo fahasimban'ny ho an'ny adiresy voalaza etsy ambony.
Package ny fiara araka ny mpanamboatra ny fanolorana ny halefa sambo mafy aelin'ny. Marika toy ny fonosana misy Electronic Media – tsy hampiharihary ny andriamby saha. Alefaso izany amin'ny alalan'ny USPS, UPS, FedEx, Misy sambo mahazo haavo na fomba izay mamela ny fonosana ho fantarina. Azafady antoka ny fiara, ary avo roa heny hijerena ny miresaka. LC Technology International, Inc. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fonosana izay very na simba amin'ny fandefasana.
Raha maniry ny handoavana ny saran'ny fanombanana mialoha amin'ny alalan'ny carte de crédit, tsindrio eo ny manampy ny entana ny bokotra etsy ambany:
Hard Drive Recovery Service Evaluation Saram- – $100
Misy fepetra mampihatra.
If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 na (727) 449-0891 ivelan'ny U.S. hiteny amin'ny solontenan'ny mpanjifa. Eoropa sy Aostralia mpitsidika tsidiho LC Tech UK famerenana tolotra.